Ny marika Lingerie dia manampy ny vehivavy ho voan'ny kanseran'ny nono
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny marika Lingerie dia manampy ny vehivavy ho voan'ny kanseran'ny nono
Adore Me - Logo amin'ny volomparasy
Ho fanomezam-boninahitra ny volana fahatsiarovan-tena momba ny homamiadan'ny nono, dia niara-niasa tamin'ny American Cancer Society ny marika akanjo sy ny mpivarotra an-tserasera Adore Me mba hanairana ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fitiliana.
Tamin'ny taona 2020—indrindra fa nandritra ireo faritra faran'izay ratsy indrindra tamin'ny areti-mifindra—dia nihena 60% ny tahan'ny fitiliana homamiadana isan-taona. Ny mammograms no fomba mahomby indrindra hamantarana ny homamiadan'ny nono amin'ny dingana voalohany indrindra - ary satria vehivavy maro no tsy nahita ny mammograma fanao isan-taona, dia heverina fa hitombo be ny tranga tsy voamarika amin'ny 2021.
Mba hanentanana ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fitiliana, dia nandray anjara tamin'ny Making Strides Against Cancer Breast Walk ao amin'ny Central Park ny Adore Me. “Tena nahafinaritra ny nahita ireo ekipanay samy hafa nanangom-bola manerana ny orinasa, nifanerasera tamin'ireo voan'ny kanseran'ny nono ary nihaino ny tantarany. Nanana lay mihitsy aza izahay teny an-dalana mba hanomezana fitaovana bra maimaim-poana ho an'ny mpandray anjara, ”hoy i Chloé Chanudet, Lehiben'ny Marketing ao amin'ny Adore Me. "Ny homamiadan'ny nono dia antony nitazonana an'i Adore Me teo am-pontsika, ary hanohy hatrany ny resaka momba ny fitiliana - mandritra sy aorian'ny volana fahatsiarovan-tena momba ny homamiadan'ny nono."
Ny fiaraha-miasa amin'i Adore Me dia nahitana fanomezana mivantana ho an'ny American Cancer Society, fanangonam-bola ao anatin'ny orinasa, ary fifandraisana amin'ny mpanjifa Adore Me an-tapitrisany momba ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fitiliana. "Ny American Cancer Society dia mankasitraka ny fanohanan'ny Adore Me, izay namporisika ny mpanjifa sy ny vondrom-piarahamonina handray anjara amin'ny fanentanana sy famatsiam-bola hamaranana ny homamiadan'ny nono amin'ny alàlan'ny dianay Making Strides Against Breast Cancer," hoy i Meagan Hallworth, Senior Development Manager at ny American Cancer Society. "Faly izahay amin'ity fiaraha-miasa ity, ary hiara-hankalaza ireo tafavoaka velona sy miroborobo izahay, ary hanampy amin'ny famatsiana ny ho avin'ny fikarohana sy ny programa momba ny homamiadan'ny nono."
Ny American Cancer Society dia manoro hevitra ny vehivavy mihoatra ny 40 taona mba handamina ny mammograms isan-taona, ary ny vehivavy mihoatra ny 20 taona hanao fitiliana ny nono isam-bolana.